जागिर अब मोबाइलबाटै,कसरी? Bizshala -
काठमाण्डौ । आस्कमी म्यानेजमेन्टले आगामी माघ १५ र १६ गते (जनवरी २९ र ३०) दुई दिनसम्म नेपालमै पहिलो पटक भर्चुअल जब फेयर सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै मोबाइल तथा कम्प्युटरबाट नै जागिरको खोजी गराउन आस्कमी कन्सल्टडटकममा भर्चुअल जब फेयर सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
कर्पोरेट क्षेत्र, बैंक, बीमा, होटल, उत्पादन तथा प्रशोधनका साथै विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई समेत लक्षित गरी अनलाइन जब फेयर सञ्चालन गर्न लागेको आस्कमी म्यानेजमेण्टले जनाएको छ ।
नेपालमै पहिलो पटक हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन जब फेयरमा घरमै बसीबसी ल्यापटप वा कम्प्युटरबाटै भिजिट गर्न सकिने आस्कमी म्यानेजमेण्टकी व्यबस्थापकीय निर्देशक अर्चना कुँवर क्षेत्रीले बताईन् । उनका अनुसार आस्कमी म्यानेजमेण्टको वेब पोर्टल आस्कमी कन्सल्टडटकमwww.askmeconsult.com मा लग इन गरेर उपलब्ध गराइएका कम्पनीहरुमा सिधै जब एप्लिकेशन दिन सकिन्छ ।
‘कर्मचारी भर्ना गर्ने कम्पनीले आफुले चाहे जस्तो कर्मचारी जब फेयर बाटलिन सक्नेछन् भने जागिरको खोजीमा भौंतारिएकाहरु तथा जागिर परिवर्तन गर्न चाहनेहरुका लागि जब फेयर उचित गन्तव्य हुनेमा हामी विश्वस्त छौं’ क्षेत्रीले भनिन् ।
क्षेत्रीकाअनुसार यो नेपालको लागि बिल्कुलै नयाँ कन्सेप्ट हो । जब फेयर मा ५० भन्दा बढी कम्पनीहरुले आफ्नो अनलाइन स्टल राख्नेछन् भने कम्तीमा १ लाख जब सिकरहरुले अनलाईन प्ल्याटफर्म भिजिट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा मात्र नभई विदेशमा रहेकाहरुले पनि रोजगारीका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
कुनै पनि कम्पनीले यो फेयरमा अनलाईन स्टल राख्न चाहेमा आस्कमी कन्सल्टडटकमwww.askmeconsult.com मा जानुपर्नेछ भने जब खोज्नेहरुले आफूलाई पायक पर्ने स्थान र उपयुक्त जागिरमा आवेदन गर्न सक्छन् । यसरी प्राप्त आवेदन आस्कमीको सफ्टवेयरमार्फत सिधै सम्बन्धित कम्पनीमा पुग्नेछ भने कम्पनीहरुले आफूले खोजेको तथा योग्यता पुगेका आवेदकहरुलाई फोन गरेर अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउने छन् ।
जागिर खोज्नेहरूले सबैभन्दा पहिले आस्कमी कन्सल्टडटकममा गएर आफ्ना व्यक्तिगत तथा शैक्षिक योग्यतालगायतका सबै विवरण भरेर एकाउण्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमूख सहकार्यमा आयोजना हुने जब फेयरमा गोल्डेन गेट कलेज साथ रहेको छ । माछापु्च्छ्े बैंक, एनआईसि एशिया बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, इसेवा, फोन पे, लोन प्लस डिपोजिट डट कम जस्ता कम्पनीहरुले पनि सहकार्य गरेका छन।
हुन्डाईको दसैँतिहार योजना : स्क्र्याचमा थप रु. १ लाखसम्म छुट
काठमाण्डौ। हुन्डाई अटोमोबाइल्स नेपालको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी...
दसैँमा डिसहोमको डबल धमाका : हप्तामा दुईजनालाई जनही रु. १ लाख
काठमाण्डौ । डिसहोमले आफ्ना ग्राहकलाई अझै बढी सेवा र सुविधा प्रदान...
नेपालमै पहिलोपटक नबिल बैंकले सुरु गर्यो ‘नबिल फोन लोन’
काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक नबिल बैंक लिमिटेडले नेपालमै...
आईएमईको प्रतिभामा कमल र इन्द्रको जित
- प्रकाश बन्जारा यूएई । आईएमई युएईले आयोजना गरेको ‘देखाऔँ प्रतिभा...